နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ညှိုးမာန်ဖွဲ့ လှည့်ကွက်ထဲက သားကောင် (ဇာတ်သိမ်း)
လူ့ဘဝမှာ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ယှဉ်နေတဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ် ဖတ်သွားပါတယ်ကွယ်။
အဆုံးထိစောင့်ဖတ်ပြီးမှ လာမန့်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရတယ် သိလား မသိင်္ဂါ..း)
သူတို့နှစ်ယောက် အဆင်ပြေပါစေ ဆုတောင်းနေတာ.. နောက်ဆုံးမှာ ဇာတ်ပေါင်းပေးလိုက်လို့ ပျော်သွားပြီ။
ပန်းချီပြောသလိုပဲ ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ ဖတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားနေမိတာ....။ ဒီလိုဇာတ်ပေါင်းတဲ့ ၀တ္ထုမျိုးက ရှားတာ...။ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းလို့ အစအဆုံးထိဖတသွားပါတယ်..။
Have read the last part. This isawell-written and an interesting short novel.
စာရေး ဆရာမ လုပ်လို့ရပြီသိလား......။
ကျွန်တော်ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ရင်
အဲဒီ ၀တ္ထု ကိုဝယ်မယ်နော်။
နားလည်မှုရပြီး ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းလေးဖြစ်သွားတာ ၀မ်းသာစရာဘဲ
အဲတစ်ဆက်တည်း congratulation လုပ်သွားတယ်နော်
၀တ္ထုလေးကောင်းလိုက်တာ။ အရင်ရက်တွေက မအားတာနဲ့ ဘလော့ဂ်မလည်ဖြစ်တာ အခုမှရောက်တော့ တစ်ပိုင်းစီမဖြစ်တော့ဘဲ အစအဆုံး တစ်ခါတည်းနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာ ပိုကောင်းသွားတယ်။ ဇာတ်လမ်းဖွဲ့ထားတာလေး အရမ်းကောင်းတာဘဲ။ ရေးတတ်လိုက်တာ။